यसरी हुदैछ काभ्रेको गोसाईस्थानमा मेलाको तयारी « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
यसरी हुदैछ काभ्रेको गोसाईस्थानमा मेलाको तयारी
बनेपा २८ साउन : काभ्रेको बनेपा नगरपालिका वडा नं. ६ मा रहेको ऐतिहासिक तीर्थस्थल गोसाईस्थानमा लाग्ने मेलालाई व्यवस्थित बनाउन समितिले पूर्ण तयारी गरेको छ । हरेक वर्ष जनैपूर्णीमाको अवसरमा लाग्ने यो मेलामा श्रद्धालु भक्तजनहरुको घुईचो लाग्ने गर्दछ ।
किंवदन्तीअनुसार देवता र दैत्यबीच समुन्द्र मन्थन गर्ने क्रममा काल्कुट वीष उत्पत्ति भइ सारा संसारका जीवजन्तुहरु ध्वस्त हुने भएपछि देवताहरुले भगवान शिवजीसँग प्रर्थना गर्दै पृथ्वी ध्वस्त हुनबाट जोगाउन आग्रह गरेका थिए । उक्त आग्रहपछि काल्कुट वीष भगवान शिवले सेवन गरी आफ्नो कण्ठमा राखेपछि औडाहा भएर छटपटिएका शिव हिमालय पर्वततर्फ जाने क्रममा त्रिशुलले जमिन रोपेर जल उत्पन्न गरी सोहि जलद्वारा शितलता प्राप्त गरेका थिए । यसरी हिमालय पर्वतमा जाँदा टेकिएको एक पाइला यसै स्थानमा परेको जनविश्वास छ । भगवान शिवजी यही बाटो भएर रसुवागढीतर्फ प्रस्थान गरेको स्थानीय बुढापाकाहरु बताउँछन् । स्वच्छ मनका साथ यस गोसाइस्थान पवित्र धाममा दर्शन गरे पश्चात मनमा शान्ति मिल्ने र चिताएको कुरा पुरा हुने आम भक्तजनहरुमा विश्वास रहिआएको छ ।
धार्मिक, साँस्कृतिक मात्र नभइ पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि गोसाईस्थान काभ्रे जिल्लाकै ऐतिहासिक स्थल हो । यहाँको उच्च भू–भागबाट दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर हिमालदेखि काठमाण्डौ उपत्यका लगायत काभ्रेकै पाँचखाल उपत्यका, बनेपा, पनौती जस्ता उपत्यकाको राम्रोसँग दृश्यावलोकन गर्न सकिन्छ । जनैपूर्णीमाको दिन यो पवित्र तीर्थस्थलमा विभिन्न जाति, भाषा, धर्म, भेषभूषा र रहनसहन भएका समुदायका मानिसहरुले यस स्थलमा आफ्नो मनोकांक्षा पूरा हुने विश्वासका साथ सहभागी हुने गरेका छन् । उक्त दिन ब्राम्हण समुदायले जनै र डोरो लगाउँछन् भने नेवार समुदायले अन्नपात चढाउने गर्दछन् । त्यसैगरी तामाङ समुदायले विभिन्न स्थानबाट आफ्नो घरपरिवार र इष्टमित्रहरुको साथमा झाँकी समेत प्रदर्शन गर्ने गर्दछन् ।
गोसाई स्थान संरक्षण समितिले कुशलतापूर्वक मन्दिरको व्यवस्थापन र भक्तजनहरुको सहयोगमा विभिन्न पूर्वाधारहरुको निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको छ । यसैगरी यो पर्वमा बनेपा नगरपालिकाले समेत व्यवस्थापनका लागि १ लाख सहयोग उपलब्ध गराएको छ । गोसाइ स्थान संरक्षण समितिका अध्यक्ष भेषराज शाह ठकुरीले दर्शनार्थीहरुका लागि पूजा आराधना सहयोग पु¥याउन व्यापक स्वयमसेवक परिचालन हुने बताएका छन् ।
पनौतीका महिला स्वास्थ्य स्वयमसेविका सम्मानित
धुलिखेल १९ मंसिर पनौती नगरपालिकाले महिला स्वास्थ्य स्वंयमसेवीकाहरुलाई सम्मान गरेको छ । बिहीबार अन्र्तराष्ट्रिय स्वंयम
तेमाल गाउँपालिकाको ३ वटा वडाले सकाए योजना सम्झौता
धुलिखेल १८, मंसिर: काभ्रेको तेमाल गाउँपालिकाका ३ वटा वडा कार्यालयले योजना सम्झौता सकाएका छन् ।